Ikhaya losapho olushushu kunye nolwamkelo
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguHelen
Indawo ecocekileyo neyanamhlanje apho wamkelekile ukuba usebenzise ikhitshi ukupheka, igumbi lokutyela ukuze utye kunye negumbi lokuphumla eliphangaleleyo kunye nezitiya zokuphumla.
Kukho inani leelwandle ngaphakathi kwemizuzu eli-10 yokuqhuba, iMerthyr Mawr yogcino lwendalo, uhambo oluselunxwemeni lwaseWelsh okanye uhambo olusecaleni komlambo onokuthi ulwenze usuka endlwini. Ndiyavuya ukukucebisa ngayo nantoni na ongathanda ukuyenza ekuhlaleni.
Igumbi lokulala linewodrophu ephindwe kabini yeyakho onokuyisebenzisa. Wamkelekile ukuba usebenzise ikhitshi ukupheka okanye ukulungiselela. Kukho itafile yokutyela kwigumbi lokuphumla elangeni elineembono ezithandekayo zegadi. Zive usekhaya.
4.79 · Izimvo eziyi-64
Igadi yam inesango elingena kwibala elikhulu apho unokuba nomdlalo webhola ekhatywayo, intenetya okanye nantoni na ekonwabisayo.
Kukho indawo yokusela yasekuhlaleni enyuka nje endulini ekwabonelela ngokutya.
Isibhedlele sasePrincess of wales sikuhambo lwemizuzu emi-5 ukuba nabani na uyasifuna (ngethemba lokuba ngaphandle kokuba usebenza apho!)
Indawo yokuphuma kaMc Arthur Glenn kukuhamba umgama okanye imizuzu embalwa ukuqhuba.
Iilwandle zigcwele, ukuhamba okuhle, ukubaleka okanye ukukhwela ibhayisekile.
Nantoni na onomdla kuyo buza kwaye ndiza kukunceda.
Umbuki zindwendwe ngu- Helen
Wamkelekile ukuba uze usebenzise igumbi lokuphumla apho kukho i-tv, indawo yomlilo evulekileyo okanye indawo enkulu ongayisebenzisa ukuba unqwenela ukuhlala kwaye udlale umdlalo webhodi, ube neglasi yewayini kunye ne-nibbles kunye nencoko njl.njl.
Wamkelekile ukuba uze usebenzise igumbi lokuphumla apho kukho i-tv, indawo yomlilo evulekileyo okanye indawo enkulu ongayisebenzisa ukuba unqwenela ukuhlala kwaye udlale umdlalo we…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bridgend